The Ministry of Foreign Affairs organizedatwo-day workshop on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – Ministry of Foreign Affairs
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar, an expert team led by Prof. Dr. Karl Jackson from the School of Advanced International Studies of Johns Hopkins University of the United States of America andalocal NGO called Mingalar Myanmar jointly organizedatwo-day workshop on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment on 1st and 2nd June 2016 in Nay Pyi Taw.
Representatives from the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Defense, the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, the Union Attorney-General’s Office, the Myanmar National Human Rights Commission and an expert team led by Prof. Dr. Karl Jackson from the School of Advanced International Studies of Johns Hopkins University of the United States of America participated in the workshop.
According to the Agenda, the key articles of the Convention, treaty-joining processes, the obligations of the State Parties and respective national stakeholders, implementation processes, reservations, challenges and experiences of other countries have been discussed during the workshop.
Dated. 1 June 2016
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းစ် တက္ကသိုလ်ရှိ အဆင့်မြင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးကျောင်းမှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ကားလ်ဂျက်ဆင် ဦးဆောင်သည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် မင်္ဂလာမြန်မာ တို့ ပူးပေါင်း၍ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ အခြားသောရက်စက်သော၊ လူမဆန်သော (သို့မဟုတ်) သိက္ခာ ကျဆင်းစေသော အပြုအမူ (သို့မဟုတ်) အပြစ်ပေးမှု ဆန့်ကျင်ရေးဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် (၂) ရက်ကြာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို နေပြည်တော်၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့နှင့် (၂) ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှု၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းစ် တက္ကသိုလ်ရှိ အဆင့်မြင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးကျောင်းမှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ကားလ်ဂျက်ဆင် ဦးဆောင်သည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်အရ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ အခြားသောရက်စက်သော၊ လူမဆန်သော (သို့မဟုတ်) သိက္ခာကျဆင်းစေသော အပြုအမူ (သို့မဟုတ်) အပြစ်ပေးမှု ဆန့်ကျင်ရေးဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်တွင် ပါဝင်သည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ စာချုပ်သို့ အတည်ပြု ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ၊ အကောင်အထည် ဖော်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ချွင်းချက်ပြုခြင်း၊ အခြားနိုင်ငံများ၏ အခက်အခဲများနှင့် အတွေ့အကြုံများ စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်